Atsangano ny Tompo, ry fanahiko, ny Fiangonan'Andriamanitra An'izao tontolo izao Switzerland (WKG)
Ny ankamaroan'ny ankizy dia mahalala ny solomaso be dia be ary finaritra amin'ny fampiasana azy ireo hahitana ny zava-drehetra mihalehibe. Ny bibikely dia toa bibikely amin'ny tantara foronina foronina. Ny sombintsombin'ny tany sy fasika dia toa fandriana renirano goavana na toy ny tany lemaka. Rehefa mametraka fitaratra lehibe amin'ny tavan'ny sakaizanao ianao, dia matetika no antony tokony hihomehezana.
Ny dikan'ny teny iray dia ny mahatonga an'i Andriamanitra hijoro eo imason'ny olona ho lehibe sy manan-danja kokoa. Rehefa mieritreritra an'izany isika ka miresaka momba ny halavan'ny Tompo dia manampy antsika hahatakatra hoe iza isika ho azy. Ny fomban'Andriamanitra sy ny fisainany dia avo sy avo kokoa noho ny antsika ary tokony hampahatsiahy ny tenantsika sy ny momba antsika. Afaka mitombo hatrany amin'ny masontsika isika raha tsy mitandrina.